सूर्योदय लघुवित्तले फेरि किन बोलायो विशेष साधारण सभा ?
काठमाडौं : सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले फागुन ११ गते विशेष साधारण सभा बोलाएको छ । सभा पुतलीबजार नगरपालिका वार्ड नं. १ स्याङजास्थित जिल्ला समन्वय समितिको सभा हलमा हुनेछ । कम्पनीको कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने विशेष प्रस्ताव राखेर सभा बोलाइएको हो ।
हाल सूर्योदयको कार्य क्षेत्र २३ जिल्लामा छ । अब राष्ट्रियस्तरको कम्पनी बनाउन लागिएको हो । यो प्रस्तावलाई विशेष साधारण सभाले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, कम्पनी मर्जमा जान तथा एक्वायर हुन पनि तयार देखिएको छ । मर्ज तथा एक्वायरका लागि सञ्चालक समितिलाई सबै काम गर्न सबै अधिकार दिइने प्रस्ताव गरिनेछ ।
साथै, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्न सञ्चालक समिति वा समितिले तोकेको व्यक्तिलाई अधिकार दिने एजेन्डा पनि विशेष साधारण सभाबाट अनुमोदन गराइनेछ । कम्पनीले यसअघि गत पुस ७ गते वार्षिक साधारण सभा बोलाएको थियो ।
त्यस एजीएमले लगानीकर्तालाई ४२.७५% बोनस सेयर र कर तिर्न २.२५% नगद लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै, बोनस सेयरपछि कायम पुँजीको ५०% हकप्रद ल्याउने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको थियो ।
सूर्योदय लघुवित्तको विशेष साधारण सभाको सूचना यहाँबाट हेर्नुहोस् ।
सूर्योदयको खुद नाफा ६१.१४% बढ्दा प्रतिसेयर आम्दानीमा किन आयो गिरावट ?
गुराँस लाइफको २९ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद नेप्सेमा सूचीकृत
जनता क्यापिटलले ८% नगद लाभांश दिने, भदौ २६ मा एजीएम
हिमाल दोलखाको आइपीओ बाँडफाँट, ७२ हजार ३४५ जनाले मागेजति पाए
२२२ स्थानीय तहमा पुग्यो ९०% बिजुली पहुँच, प्रदेश ३ मा सबैभन्दा बढी
धितोपत्र बोर्डले सीडीएसलाई सोध्यो स्पष्टीकरण, ल्याप्चे किन अन्त्य भएन ?
सजिलो लघुवित्तको नाफा ९६८.८९% वृद्धि, निक्षेप र कर्जा पनि यसरी बढायो